“တကူးတကmessage ပို့ပြီး Victim Blaming လုပ်တဲ့ ဟာမကြီးကို မြင်ပြီး တော်တော်ရွံမိတယ်” ဆိုတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ….. – Cele Oscar
သရုပျဆောငျ ပကျထရဈရှာ ကတော့ လူငယျပီပီ ဖကျရှငျဆနျးဆနျးလေးတှေ ကို လိုကျဖကျအောငျ ဝတျဆငျတတျသူမငျးသမီးလေး တဈဦး ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှကေလညျး သူမရဲ့ နပေုံထိုငျပုံလေးတှကေို အားကငြေးမော နရေတာ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ မှာတော့ သူမရဲ့ဝတျပုံ စားပုံတှကေို မနာလို တိုကျခိုကျ နသေူတဈဦးအကွောငျးကိုသကျသေ နှငျ့ တကှ ခပြွလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
” အာဏာသိမျးခါစ လှနျခဲ့ တဲ့ ၇ လလောကျက ကိုယျကွုံခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးကို ဗရမျးဗတာ မီဒီယာ page တဈခုကအခု မှ အစဖျောပွီးတငျထားတာကိုသူငယျခငျြးနဲ့ fan တဈခြို့ပွလို့ တှလေို့ကျသေးတယျအဲ့ဒီကိစ်စကို Not bothered ဆိုပွီး နနေလေိုကျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ရဲ့ personal account အထိ ကူးတကmessage ပို့ပွီး Victim Blaming လုပျတဲ့ ဟာမကွီးကို မွငျပွီး တျောတျောရှံမိတယျ ။ မိနျးကလေး အခငျြးခငျြး ကိုယျခငျြးမစာတဲ့ အပွငျ
ဒီတဏှာရူးအားပေးမကွီးက မိနျးမသား တဈယောကျရဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှုကို judge လုပျနတေယျ။ဘာတဲ့?! “ခုနက post တငျတာ တှတေ့ယျ ဟိုကောငျလညျး မမှားခဲ့ပါဘူး ကိုယျဝတျစား ဆငျခွငျနတေဲ့ပုံစံကို လညျးပွနျကွညျ့ဦး” တဲ့ 😅 I can wear whatever the fuck I want လေMY BODY, MY CHOICE ပဲ!!!!! Stop victim blaming!ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျ ကိုယျလုပျခငျြတာ လုပျမယျ ကိုယျဝတျခငျြတာဝတျမယျ အဲ့ဒါတှကေ စျောကားဖို့အတှကျ excuse တှမေဟုတျဘူးနျောမိနျးကလေးခငျြး အဲ့လို Victim Blaming လုပျတာလောကျ ဒေါသထှကျတာမရှိဘူး။ ဒီလိုအောကျတနျးစား အတှေးအချေါတှေ ခတျေမရှိတော့ဘူးနျော။ ” ဆိုပွီး ရေးသား ထားတာ ဖွဈပါတယျ။
သရုပ်ဆောင် ပက်ထရစ်ရှာ ကတော့ လူငယ်ပီပီ ဖက်ရှင်ဆန်းဆန်းလေးတွေ ကို လိုက်ဖက်အောင် ဝတ်ဆင်တတ်သူမင်းသမီးလေး တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမရဲ့ နေပုံထိုင်ပုံလေးတွေကို အားကျငေးမော နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မှာတော့ သူမရဲ့ဝတ်ပုံ စားပုံတွေကို မနာလို တိုက်ခိုက် နေသူတစ်ဦးအကြောင်းကိုသက်သေ နှင့် တကွ ချပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
” အာဏာသိမ်းခါစ လွန်ခဲ့ တဲ့ ၇ လလောက်က ကိုယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ဗရမ်းဗတာ မီဒီယာ page တစ်ခုကအခု မှ အစဖော်ပြီးတင်ထားတာကိုသူငယ်ချင်းနဲ့ fan တစ်ချို့ပြလို့ တွေ့လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကို Not bothered ဆိုပြီး နေနေလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ personal account အထိ ကူးတကmessage ပို့ပြီး Victim Blaming လုပ်တဲ့ ဟာမကြီးကို မြင်ပြီး တော်တော်ရွံမိတယ် ။ မိန်းကလေး အချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းမစာတဲ့ အပြင်
ဒီတဏှာရူးအားပေးမကြီးက မိန်းမသား တစ်ယောက်ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို judge လုပ်နေတယ်။ဘာတဲ့?! “ခုနက post တင်တာ တွေ့တယ် ဟိုကောင်လည်း မမှားခဲ့ပါဘူး ကိုယ်ဝတ်စား ဆင်ခြင်နေတဲ့ပုံစံကို လည်းပြန်ကြည့်ဦး” တဲ့ 😅 I can wear whatever the fuck I want လေMY BODY, MY CHOICE ပဲ!!!!! Stop victim blaming!ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်မယ် ကိုယ်ဝတ်ချင်တာဝတ်မယ် အဲ့ဒါတွေက စော်ကားဖို့အတွက် excuse တွေမဟုတ်ဘူးနော်မိန်းကလေးချင်း အဲ့လို Victim Blaming လုပ်တာလောက် ဒေါသထွက်တာမရှိဘူး။ ဒီလိုအောက်တန်းစား အတွေးအခေါ်တွေ ခေတ်မရှိတော့ဘူးနော်။ ” ဆိုပြီး ရေးသား ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။